जताततै अन्तरघात , सबैको स्वतन्त्र उम्मेदवार पाण्डेयलाई साथ - VON TV
८ भाद्र २०७६, आईतवार ०९:१५ 490 ??? ???????
गैह्र आवासिय नेपाली संघ पोर्चुगलको २०१९-२१ कार्यकालका लागि आज २५ अगस्तमा सम्पन्न भईरहेको निर्वाचनमा एक्ला स्वतन्त्र उम्मेदवार गणेश पाण्डेयलाई सबैको साथ रहेको छ।
संचारकर्मी पाण्डेयले संघको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्। परिवर्तन , पारदर्शिता, समानता, जवाफदेहिता र स्वतन्त्रताको नारा लिएर संघको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका पाण्डेय संस्थागत सुदृढता नै पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । संघप्रति आम सर्वसाधारणले अपनत्वको भावना हुन नसकेको अवस्थामा “मेरो एनआरएन” होइन, “हाम्रो एनआरएन ” नै आजको आवाश्यकता रहेको उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार पाण्डेयले बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस निकट जनसम्पर्क समितिको पहिलेदेखि नै उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार पाण्डेय भित्रि समर्थन रहेको थियो। गठबन्धनका कारण खुलेर समर्थन गर्न असजिलो भएता पनि अहिले आएर नेकपासहितको गठबन्धनले उपाध्यक्ष पदका स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भित्रभित्रै पुरै सहयोग र समर्थन गरेको खबर छ।
उपाध्यक्ष पदक स्वतन्त्र उम्मेदवार पाण्डेय भन्छन , ” एक्लो उम्मेदवार भएकाले हामी व्यक्तिगत रुपमा सबै ठाउमा पुग्न सकेनौ। तर हामीलाई फोन र म्यासेजबाट आएका र पाएका समर्थनले उत्साहित छौ। अझै भनु नेकपा , जनजाति , महिला समाज र गठबन्धनमा भएका प्रमुख शक्तिहरुका नेतृत्वपंक्तिले नै व्यक्तिगत रुपमा भेटेर र फोनमार्फत समर्थन भएको बताएपछि हामी झनै उत्साहित भएका छौ।”
यसघि नै नारी समाज पोर्चुगलले उपाध्यक्ष पदका र एनआरएनए पोर्चुगलको निर्वाचनका एक मात्र स्वतन्त्र उम्मेदवार पाण्डेयलाई पूर्ण समर्थन गरिसकेको छ।
पाण्डेयसँगै उपाध्यक्ष पदमा २ पदका लागि ४ जनाले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन। उनका प्रतिद्वन्दीमा अशोक गुरुङ र पेम्छिरी शेर्पा र मक्षेन्द्र अर्याल रहेका छन् ।